के एमबाप्पे र हालान्ड मेसी र रोनाल्डोभन्दा राम्रा छन्?
काठमाडौं। क्लब फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा गत साता इर्लिङ हालान्ड र केलियन एमबाप्पेका दाँजोमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी फिक्का देखिए। त्यसोभए के यसले विश्व फुटबल परिवर्तन भएको संकेत गर्दै छ?
बार्सिलोनाका कप्तान ३३ वर्षे मेस्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेड तथा रियाल मड्रिडका पूर्व स्ट्राइकर ३६ वर्षे रोनाल्डोले विगत एक दशकभन्दा लामो समय विश्व फुटबलमा एकछत्र राज गरे। दुबैले क्लबबाट च्याम्पियन्स लिगमा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन्।
पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का २२ वर्षे फरवार्ड एमबाप्पेले मंगलबार मेस्सीको टिम बार्सिलोनाविरुद्ध ह्याट्रिक गरे। घरेलु मैदानमा मेस्सीको गोलबाट बार्सिलोनाले अग्रता लिए पनि नतिजा हात पार्न सफल भएन। बार्सिलोना ४–१ को स्तब्ध बन्यो।
२० वर्षे फरवार्ड हालान्डले दुई गोल गरेपछि बुधबार बोरुसिया डर्टमण्डले सेभियामाथि ३–१ को विजय हासिल गर्यो। त्यही दिन रोनाल्डो गोल गर्न असफल हुँदा उनको टिम युभेन्टस एफसी पोर्टोसँग २–१ ले पराजित भयो।
‘‘एमबाप्पेले ह्याट्रिक गरेको हेरेपछि मलाई उत्प्रेरणा मिल्यो। त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद,’’ स्पेनमा दुई गोल गरेछि हालान्डले भने।
विश्व फुटबलमा नयाँ प्रतिद्वन्द्वीता आवश्यक छ?
पछिल्लो १२ बालोन डी‘ओर अवार्डमध्ये रोनाल्डो र मेस्सीले संयुक्त रुपमा ११ अवार्ड जितेका छन्।
रोनाल्डोले फुटबल इतिहासमा सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। उनले स्पोर्टिङ लिस्बन, युनाइटेड, रियाल मड्रिड, युभेन्टस र पोर्चुगलबाट ७६३ गोल गरिसकेका छन्।
च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा पनि रोनाल्डो सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्। उनले पाँच पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितिसकेका छन्। रोनाल्डो रियाल मड्रिडबाट पनि सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पनि सबभन्दा धेरै गोल गर्ने कीर्तिमानबाट रोनाल्डो सात गोलले मात्र टाढा छन्।
मेस्सी ला लिगामा सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्। बार्सिलोनाबाट पनि मेस्सी सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्। अर्जेन्टिनाका मेस्सीले क्लबबाट सुपरकप सहित गरेर ३४ उपाधि जितिसकेका छन्।
फ्रान्सका स्ट्राइकर एमाबाप्पे पनि विश्वकै सम्भावित उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। पीएसजीले एमबाप्पेलाई दोस्रो उच्च मूल्यमा अनुबन्धन गरेको थियो। मोनाकोबाट ४६ खेलमात्र खेलेका २२ वर्षे एमबाप्पेलाई पीएसजीले १६ करोड ६० लाख पाउण्डमा अनुबन्ध गरेको थियो।
२२ वर्षको उमेरमा एमबाप्पे पीएसजीका लागि धेरै गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी बनेका छन्। उनले पीएसजीका लागि एक सय ११ गोल गरिसकेका छन्। पीएसजीबाट एमबाप्पेभन्दा धेरै गोल गर्नेमा इडिसन काभानी र ज्लाटन इब्राहिमोभिच मात्र छन्। एमबाप्पले फ्रान्सबाट विश्वकपको उपाधि पनि जितिसकेका छन्।
एमबाप्पेको तुलनामा हालान्डको उदय अलि फरक रहेको छ। गत सिजनसम्म २० वर्षे हालान्डको चर्चा नर्वे भन्दा बाहिर भएको थिएन। तर च्याम्पियन्स लिगमा गएको सिजन आश्र्चयजनक रुपमा गोल गर्न थालेपछि उनको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो।
हालान्डले साल्जबर्ग र बोरुसिया डर्टमन्डबाट च्याम्पियन्स लिगको १३ खेलमै १८ गोल गरेका छन्। हालसम्म च्याम्पियन्स लिगमा कुुनै पनि खेलाडीले २० खेलअघि १८ गोल गर्न सकेका थिएनन्।
“यसको अर्थ हामीले मेस्सी र रोनाल्डोपछि हेर्नलायक केहि पाएका छौं,” ग्यारी लिनकरले बीटी स्पोर्ट्ससँग भने, “यिनीहरुले जसरी गोल गरेका छन्, त्यो मेस्सी र रोनाल्डोको समयमा जस्तै छ।”
म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व रक्षक रियो फर्डिनान्ड भन्छन्, “मंगलबार राति मेस्सी एमबाप्पेको छायाँमा परे भने बुधबार राति रोनाल्डोलाई हालान्डले छाँयामा पारिदिए। यसले फुटबलमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ। यसले विगत दश वर्षको भन्दा फरक प्रतिद्वन्द्वीता देखाएको छ। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको अब को? को जवाफ दिएको छ।”
चार जनाको तुलना कस्तो?
गत सिजनको सुरुआतपछि चारै खेलाडी चर्चामा छन्। औसतमा हेर्ने हो भने मेस्सीले हालान्डको तुलनामा १.४ प्रतिखेलमा गोल गरेका छन्। अर्जेन्टिनाका मेस्सीले गत सिजन असिस्ट गर्नेमा कीर्तिमान बनाएका थिए।
रोनाल्डो मेस्सी हालान्ड एमबाप्पे
खेल ६४ ६६ ५८ ५७
गोल ५५ ४७ ६२ ४४
असिस्ट ९ २९ ७ १९
च्याम्पियन्स लिगको जारी सिजनमा हालान्ड र एमबाप्पे उच्च लयमा देखिएका छन्। अझ बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। २०१९/२० सिजन सुरु भएपछि एमबाप्पे र हालान्डले संयुक्त रुपमा २८ गोल गरिसकेका छन्। मेस्सी र रोनाल्डोले भने संयुक्त रुपमा १५ गोल गरेका छन्।
२१औं जन्मोत्सव मनाउनुअघि एमबाप्पेले १९ र हालान्डले १८ गोल गरेका छन्। एमबाप्पेले २१औं जन्मदिन मनाउनुअघि उनी च्याम्पियन्स लिगमा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको सुचीको शीर्ष स्थानमा छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका करिम बेन्जेमाले १२ गोल गरेका छन्। त्यो उमेरमा मेस्सीले आठ र रोनाल्डोले ९ गोल गरेका थिए।
प्रकाशित: मंगलबार, फागुन ११, २०७७ ०७:५४
क्लब फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा गत साता इर्लिङ हालान्ड र केलियन एमबाप्पेका दाँजोमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी फिक्का देखिए।